प्रकाश सपूतले गलबन्दी गित गाउदा उर्लियो जनसागर मानिस हरुको (भिडियो) – aajnepal
Homefilmyप्रकाश सपूतले गलबन्दी गित गाउदा उर्लियो जनसागर मानिस हरुको (भिडियो)
June 6, 2019 aajnepal filmy 0
गायक प्रकाश सपुतको एक एक गित भाइरल हुने र मान्छे हरुले मन पराउने क्रम जारि छ सहर मा कहिले पनि लोक दोहारी गित नसुन्ने र लोक दोहारी गित लाइ गाउले ले सुन्ने गित को संघया दिने युबा जमात ले पनि निकै मन पराउने गित निकालेर चर्चा कमाएका छन प्रकाश सपुतले अहिले भर्खरै मात्र गलबन्दी नामको गित निकालेर निकै चर्चा कमाइरहेका सपुतको मेला र विदेश तर्फा निकै माग बढेको छ युटुब मा मात्र सबै भन्दा छोटो समय मा धेरै पटक हेरिने रेकर्ड समेत तोडेको छ यो गीतले |
दोहोरी ब्याट, बोल माया, दोहोरी ब्याटल -२, गलबन्दी जस्ता गीत उनका निकै लोकप्रिय गीत हुन् । प्रकाश सपुत सम्पूर्ण नेपालीको मन मनमा बस्न सफल भइसकेका छन् । यो गीतले यस गीतका कलाकारलाई पनि निकै उचाइमा पुर्‍याइदिएको छ ।यस्तै यसै गीतका गायक प्रकाश सपूत यति बेला देशका विभिन्न कार्यक्रममा निकै व्यस्त छन् । यस्तै प्रकाशले केही दिन अघि मात्र एक महोत्सवमा लाइभ प्रस्तुति दिएका थिए । प्रकाश स्टेज चढ्ने बित्तिकै त्यहाँको माहौल नै परिवर्तन भएको थियो । प्रकाशले गलबन्दी गाउँदा उनको लागि निकै हुटिङ आएको थियो । उनलाई हेर्नको लागि पुरा जनसागर नै उर्लिएको थियो । प्रकाशले पनि दर्शकका लागि निकै उत्साहका साथ प्रस्तुति दिइरहेका थिए । सबैले उनको निकै तारिफ पनि गरे । भिडियो हेर्नुहोस्
यो पनी हेर्नुहोस्>>> मुन्द्रेको कमेडी क्लवमा पल र आँचल (आँप) जोडी….(प्रोमो भिडियो सहित)
काठमाडौँ जेठ, २३ । मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा चर्चित आँप जोडी पुगेका छन् । आउँदो सोमबार प्रसारण हुने नयाँ भागमा नायक पल शाह र नायिका आँचल शर्मा देखिएको प्रोमो युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । उनीहरूको जोडी पहिलो पटक मुन्द्रेको कमेडी क्लवमा आएका हुन्। पछिल्लो समयको निकै चर्चित एवं लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ मा प्रत्येक हप्ता नयाँ नयाँ चर्चित पाहुनाहरू लाई देख्न पाइन्छ । हरेक सोमबार साँझ ८:५० देखी नेपाल टेलिभिजन बाट प्रसारण हुँदै गएको कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि निकै मन पराइएको हुन्छ । यस कार्यक्रमको अध्यक्षमा चर्चित निर्देशिका दिपाश्री निरौला रहेकी छिन् ।
कार्यक्रम सञ्चालन भने हास्य कलाकार जितु नेपाल (मुन्द्रे)ले गर्दै आएका छन् । त्यसै गरी चर्चित कलाकार राजाराम पौडेल घरबेटीको रूपमा, फुलेन्देको आमा र लट्टे र अन्य कलाकारहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी छन् । आउँदो सोमबार पर्दामा सर्वाधिक रुचाइएको जोडी नायक तथा मोडल पल शाह र नायिका आँचल शर्मालाई देख्न पाइने भएको छ । पछिल्लो समय आँप जोडीको उपनामले परिचित यी जोडीलाई दर्शक स्रोतले अत्यधिक रुचाउँछन् । भिडियो हेर्नुहोस्
यो पनी हेर्नुहोस्>>> विष्णु माझीको अर्को मार्मिक मन छुने गित…(भिडियो सहित)
काठमाण्डौँ । लोक गायिका विष्णु माझी हाल नेपालको चर्चित तथा उत्कृष्ट लोक गायिकाहरू मध्ये एक हुन् । उनले गाएका गीतहरू निकै नै मार्मिक रहेका हुन्छन् । उनले प्राय जसो मार्मिक गीतमा आफ्नो स्वर दिएकी हुन्छिन् । पछिल्लो समय प्रदेशिएका नेपाली दाजुभाइहरूको पिडा, मर्म र गाउँघरमा रहेकी, प्रेमिकाको दुख पिडालाई मलम लगाउने खालको गीत बजारमा आएको छ । वास्तविक यथार्थता झल्किने मार्मिक गीतले सबैको मन छोएको छ । अभ्यास डिजिटल म्युजिक प्रा.ली. को प्रस्तुतिमा सर्जक विजय चन्द ‘दर्पण’को मर्मस्पर्शी लोकदोहोरी गीत ‘सुतली’ केही दिन पहिले मात्र बजारमा आएको हो । गीतमा बहुचर्चित लोक गायिका विष्णु माझी र राजेश खड्काको सुमधुर आवाज रहेको छ ।
गीतमा लय राजेश खड्का सानुकै रहेको छ भने शब्द विजय चन्द ‘दर्पण’को रहेको छ । चर्चित निर्देशक कपिल लामाको निर्देशन रहेको भिडियोको छायाङ्कन भने सुरेश श्रेष्ठ र महेश महराको रहेको छ।अमर शाक्यको सम्पादन रहेको भिडियो निकै उत्कृष्ट बनेको छ । भिडियोमा चर्चित मोडल सगुन शाही र बाबु कृष्ण परियार रहनु भएको छ। उक्त गीतलाई वसन्त थापाको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत बजारमा ल्याइएको छ।